Mogadishu Journal » Duqeyn xalay lagu dilay dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab
Mjournal :-Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in duqeyn hor leh oo xagga circa ah xalay lagu bartilmaameedsaday horjoogayaal iyo maleeshi katirsan Alshabaab.
C/Fataax Xaaji Cabdulle oo ah guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay ilaa 6 qof oo katirsan Shabaab kuwaasi oo isugu jira horgoogayaal maleeshiyaad oo Alshabaab katirsan.
Duqeynta ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Iidow Jalaad oo khayaas ahaantii 30 KM u jira degmada Walaweyn ee Gobolka Shabeelada Hoose.
C/fataax Xaaji Cabdulle ayaa sheegayaa in xiligii falka uu dhacayay Shabaabku ay saarnaayeen Mooto Bajaaj halkaasi ku safraysay,mana jirto faah faahin intaasi sii dheer.
Mas’uuliyiinta Gobolka ayaaa sheegaya in aanay jirin inta la ogyahay wax dhibaato ah oo ka soo gaartay dadka shacabka ah ee kunool deegaankaasi.
Sawirrada shaqsiyaad loo qabtay Qaraxii Zoobe